एन्टिजेन परीक्षण नगरी काठमाडौं प्रवेश बन्द, के हो एन्टिजेन ? « नारी खबर >
कोरोना भाइरसको महामारी फेरी बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले काठमाडौं उपत्यका छिर्नका लागि एण्टीजेन परिक्षण अनिवार्य गरेको छ । सोमबार काठमाडौँ जिल्ला कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथाम समितिको बैठकले उपत्यका प्रवेश गर्नेलाई एण्टीजेन परिक्षण अनिवार्य गरेको हो ।
बैठकले काठमाडौ भित्रने प्रत्येक नाकामा अबदेखि कोभिड १९ को एन्टीजेन परीक्षणको लागि डेस्क राख्ने निर्णय गरेको हो। परीक्षणको लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री भने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले उपलब्ध गराउने भएको छ। फेरी काठमाडौं भित्रन एण्टीजेन परिक्षण अनिवार्य गरेपछि धेरैलाई यो एण्टीजेन परिक्षण के हो भन्ने धेरैलाई लागेको छ । त्यसैले हामीले यसबारेमा जानकारी राखेका छौँ ।
शुरुमा एण्टीजेनबारे बुझौँ :
जापानस्थित स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय होक्काइडो, जापानकी माइक्रोबायोलोजिष्ट डा. पुजा न्यौपानेका अनुसार हाम्रो शरिरले नचिनेका प्रोटिनलाई नष्ट गर्नका लागि उत्पादन भएको रसायन वा एन्टिबडी नै एण्टीजेन हो । जब कोरोना भाइरस हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ, शरिरमा रहेका प्रतिरक्षा कोषहरूले यी प्रोटिनहरूलाई पहिचान गर्न सक्दैन। त्यसैले यस्ता प्रोटिनलाई नष्ट गर्न प्रतिरक्षा प्रणालीले एन्टिबडी लगायत विभिन्न रसायनहरू उत्पादन गर्छ। कुनै तत्व जसलाई हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीले चिन्दैन र फरेन बडीको रुपमा लिन्छ, त्यसलाई एन्टिजेन भनिन्छ। अर्को शब्दमा फरेन बडी (प्रायजसो प्रोटिन) जसले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई उत्तेजित गर्छ, त्यसलाई एन्टि–जेन (एन्टिबडी जेनरेटर) भनिन्छ। यी भाइरल प्रोटिन पनि त्यसैले एन्टिजेन हो।
कसरी गरिन्छ त एन्टिजेन परीक्षण ?
कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र चरणको बेला माथिल्लो श्वासप्रश्वास प्रणालीमा रहेका भाइरल प्रोटिन (एन्टिजेन) पत्ता लगाउनका लागि एन्टिजेन परिक्षण गरिन्छ। त्यसैले यो परीक्षण गर्दा पिसिआर परीक्षणमा गरेजस्तै नेजोफ्यारेन्जियल स्वाब अथवा ओरोफ्यारेन्जियल स्वाब नमुनाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। संकलन गरिएका स्वाबलाई एक तरल पदार्थमा डुबाइ नमुनाबाट भाइरसको टुक्राहरु रिलिज गरिन्छ अनि उक्त तरल पदार्थको एक थोपा टेस्ट किटमा राखिन्छ ९चित्र हेर्नुहोस्०। यदि नमुनामा भाइरल एन्टिजेन छ भने यसले टेस्ट किटमा भएको एन्टिबडीसँग रियाक्सन गर्छ र एन्टिजेन(एन्टिबडी कमप्लेक्स बन्छ।
पिसिआर परीक्षणको तुलनामा एन्टिजेन परीक्षण निकै कम लागतमा सजिलै गर्न सकिने भए पनि यद्यपि एन्टिजेन परीक्षणको संवेदनशीलता तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। किनभने भाइरल कल्चर अथवा पिसिआरमा जस्तै भाइरस अथवा आरएनएको amplification एन्टिजेन परीक्षणमा गरिँदैन। त्यसैले स्वाब नमुनामा एन्टिजेन मात्रा कम हुँदा यस परीक्षणले गलत नकारात्मक (False Negative) नतिजा दिने गर्छ। कुनै पनि टेस्ट “highly sensitive” छ भन्नुको मतलब यसले निकै कम “गलत नकारात्मक” (False Negative) नतिजा दिन्छ र कुनै टेस्ट “highly specific” छ भन्नुको मतलब यसले मात्र केही “गलत सकारात्मक” (False Positive) नतिजा दिने गर्छ। एन्टिजेन परीक्षणको तुलनात्मक रूपमा “specificity” (विशिष्टता) उच्च हुन्छ त्यसैले यसले निकै कम False Positive नतिजा दिन्छ।
यसको मतलब यदि कुनै व्यक्तिमा एन्टिजेन परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ देखिएमा उसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण लगभग निश्चित हुन्छ। तर एन्टिजेन परीक्षणको “sensitivity” कम हुने हुनाले “true positive” को संख्या पिसिआरको तुलनामा कम हुन्छ। अर्को शब्दमा, उल्लेखनीय संख्यामा कोभिड-१९ का बिरामीहरुमा एन्टिजेन परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। यस समयमा हामीसँग र्‍यापिड एन्टिजेन टेस्टको क्लिनिकल उपयोगिता मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त अध्ययन भएका छैनन् तर केही प्रकाशित अध्ययनहरूले देखाए अनुसार पिसिआरको तुलनामा र्‍यापिड एन्टिजेन टेस्टको “specificity” ९९ प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ तर “sensitivity” भने केवल ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। हाल प्रयोगमा रहेका इन्फ्लुएन्जाको लागि गरिने र्‍यापिड एन्टिजेन टेस्टहरुको संवेदनशीलता पनि लगभग ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छन्।
जापानले टोकियोमा आधारित Fujirebio Inc’s antigen test kit प्रयोगलाई स्वीकृत गरेको छ भने हालसालै इन्डियाको CMR ले दक्षिण कोरियाली कम्पनी (SD Biosensor) लाई प्रयोगको लागि मान्यता दिएको छ। आउँदा दिनहरुमा यो आशा गर्न सकिन्छ कि एन्टिजेन टेस्ट व्यापक रूपमा उपलब्ध हुनेछ र यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्न एन्टिजेन परीक्षणको भूमिका ‘गेमचेन्जर’ पनि हुन सक्छ।